Rh blood group system (အာရ်အိတ်ခ်ျ) သွေးအုပ်စုခွဲနည်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
1. Rh neg ဖခင် နဲ့ Rh positive မိခင်ဆိုရင်ကော အန္တရာယ်ရှိပါသလားဆရာ။ Rh+ မိဘနှစ်ပါးကနေ Rh- မွေးတဲ့ကလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ မွေးတုန်းကပြသနာမရှိပါဘူးဆရာ။ ကလေး သွေးလွန်တုတ်ကွေး ဖြစ်လို့သွေးလိုတော့မှ Rh- မှန်းသိတယ်။ တော်တော်လေးရှာလိုက်ရတယ်ဆရာ။
2. ဆရာ ကျွန်တော်က Rh - O သွေးသမားပါ ဇနီးကတော့ Rh + B သွေးပါ ကိုယ်ဝန်က ၃ လနီးပါးရှိပါပြီ။ ဘာတွေ ဂရုစိုက်စရာ လိုပါသလဲဗျာ။
3. ဟိုနေ့က သွေးသွားလှူတာ သွေးအမျိုးအစားကို (ဘီ ပေါ့စတစ်) လို့ ပြောပါတယ်။ အရင်က မကြားဖူးလို့ ရိုးရိုး (ဘီ) နဲ့ ဘာကွာပါလဲ။ (ဘီ) က ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲ သိချင်ပါတယ်။
သွေးအုပ်စုခွဲတာမှာ ၂ ခုတွဲပြောမှ ပြည့်စုံပါတယ်။ ဥပမာ အေ (+)။ အမျိုးသမီးတွေမှာ (-) ဖြစ်ရင် အရေးကြီးတယ်။ လူ့သွေးကို လူ့မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင် နီရဲနေတာကလွဲလို့ တယောက်သွေးနဲ့ နောက်တယောက်သွေး ခွဲခြားမရနိုင်ပါ။ သူရဲကောင်းသွေးနဲ့ သူရဲဘောကြောင်သူသွေး အရောင်အတူတူပါဘဲ။ အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ရင်တော့ မတူတာတွေ သိလာမယ်။ အုပ်စုခွဲနည်းက အများဆုံး (၂) နည်းကို သုံးတယ်။ တခြားနည်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ အများဆုံး အသုံးကျတဲ့ Blood group systems သွေးအုပ်စုခွဲနည်းတွေကတော့ -
1. ABO blood group system (အေ-ဘီ-အို) စနစ် နဲ့
2. Rh (Rhesus) blood group system (အာရ်အိတ်ခ်ျ) စနစ်တွေဖြစ်တယ်။ ဒီစာမှာ ဒါတခုထဲသာရေးပါမယ်။
International Society of Blood Transfusion နိုင်ငံတကာ သွေးသွင်းအသင်းကြီးကနေ သတ်မှတ်ထားတာ သွေးအုပ်စုပေါင်း (၃ဝ) ရှိတယ်။ သွေးနီဥအပေါ်မှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းပေါင်း အစုံ ၃ဝ ရှိတယ်။ လူတယောက်ဟာ အဲဒီထဲက တမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေထဲမှာ (အင်တီဂျင်) ခေါ်တဲ့ သွေးအုပ်စုကို ပြဌာန်းပေးတဲ့ အမျိုးပေါင်း ၆ဝဝ မကရှိတယ်။ လူတိုင်း သန္ဓေသားဘဝကနေ သေတဲ့ အထိ သွေးအုပ်စုက ပြောင်းမသွားဘူး။ ဒါပေမဲ့ တမင်တာ ပြောင်းအောင် လုပ်နိုင်တာတော့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးတာ။ (အေ) သွေးလူနာကို (အို) သွေး ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွေ အများကြီးသွင်းပေးရင် (အို) ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
လူတယောက်ဟာ ABO အုပ်စုခွဲနည်းထဲက တမျိုး နဲ့ Rh အုပ်စုခွဲနည်းထဲက တမျိုးရှိလာမယ်။ အများနားယဉ်တဲ့ (အေ-ဘီ-အို-အေဘီ) (၄) မျိုးစလုံးမှာ အပေါင်းနဲ့ အနုတ်ရှိလို့ ပေါင်း (၈) မျိုးဖြစ်တယ်။ ABO အရ (ဘီ) နဲ့ Rh က အပေါင်း။ ဒီနေရာမှာ (ဘီ) (ပေါ့ဇေးတစ်ဖ်) ဆိုတာ အသဲရောင် (ဘီ) ပိုး ရှိတာနဲ့ မှားတတ်တယ်။
တခြားသွေးအုပ်စုခွဲနည်းတွေထဲမှာ MNS system စနစ်၊ Kell system စနစ်၊ Lewis system စနစ် စတာတွေ ပါတယ်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ (အာရ်အိတ်ခ်ျ) စနစ်ကို Philip Levine နဲ့ Rufus Stetson ပညာရှင် ၂ ဦးကနေ စတွေ့တာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံက လူပေါင်း ၂၂၆၁ဝ၂၅၂၄၄ (သန်း ၂ ထောင်ကျော်) ကို စာရင်းကောက်တယ်။ ရလဒ်တွေကတော့ -
ဒါကြောင့် Rh (+) ဖြစ်သူ 90.35% နဲ့ Rh (-) ဖြစ်သူ 9.65% ရှိတယ်။ Rh negative (အာရ်အိတ်ခ်ျ) အနုတ်ရှိသူတွေက အာရှမှာ ဝ့၃% ရှိပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ၁၅% ရှိတယ်။ အာရှသားတွေ ကံကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲ၊ ဆက်ဖတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရင်တော့ အဆင်မသင့်တာဖြစ်နေရင် ထိခိုက်မှာသေခြာတယ်။ မိခင်က Rh negative အာရ်အိတ်ခ်ျ အနုတ် ဖြစ်နေပြီး ဖခင်က Rh positive အာရ်အိတ်ခ်ျ အပေါင်း ဖြစ်နေရင် သတိထားရတော့မယ်။ ကလေးကလဲ Rh negative အာရ်အိတ်ခ်ျ အနုတ် ဖြစ်နေရင် ကလေးရဲ့ သွေးနဲ့ တွေ့ရလို့ မိခင်သွေးကို တန်ပြန်တဲ့ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်။ သားဦးကိုယ်ဝန်မှာ သိပ်ဒုက္ခမပေးပါ။ တကယ်လို့ နောက်ကိုယ်ဝန်တွေမှာ အထဲက ကလေးဟာ Rh positive အာရ်အိတ်ခ်ျ အပေါင်း ဖြစ်နေရင် မအေ သွေးထဲက (အင်တီဘော်ဒီ) တွေကနေ ကလေးရဲ့သွေးကို ဆန့်ကျင်စေလိမ့်မယ်။ အချင်း-ချက်ကြိုးကနေတဆင့် သွေးက ဆက်စပ်နေတယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးမယ် Rh disease (အာရ်အိတ်ခ်ျ) ရောဂါ ရလာမယ်။ အသက်ကိုပါ ရန်ရှာနိုင်တယ်။
အဖေ အပေါင်း + အမေ အနုတ်
မိခင်လောင်းဟာ Rh negative အာရ်အိတ်ခ်ျ အနုတ်ဖြစ်နေရင် ဆေးစစ်ရမယ်။ Antibody screen (အင်တီဘော်ဒီ ဆခရင်) ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပဌမ ၃ လထဲမှာ တခါ နဲ့ ၂၈ ပါတ်မှာတခါ လုပ်ရမယ်။ (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ မထုတ်သေးရင် Rh immune globulin ဆေး ထိုးရမယ်။ ဆေးကနာတယ်။ ကိုယ်ပူတတ်တယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေးက Rh negative အာရ်အိတ်ခ်ျ အနုတ် ဖြစ်နေရင် ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါ။ Rh positive အာရ်အိတ်ခ်ျ အပေါင်း ဆိုရင်တော့ မိခင်ကို ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ ဆေးထပ်ထိုးရမယ်။ နောက်ကိုယ်ဝန်တွေမှာလဲ ကလေးက Rh positive အာရ်အိတ်ခ်ျ အပေါင်း ဖြစ်နေရင် ဆေးထိုးရမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာမှာသာမကဘဲ Rh positive blood အာရ်အိတ်ခ်ျ အပေါင်း သွေးနဲ့ တွေ့နိုင်ခြေရှိတဲ့ တခြား အခြေအနေတွဖြစ်တဲ့
- Chorionic villus sampling စစ်ဆေးနည်းလုပ်ခြင်း၊
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး သွေးသွန်ခြင်း၊
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး ဒဏ်ရာရခြင်း၊
- ကလေးအနေအထား မှန်အောင် လှည့်ပေးရခြင်းတွေမှာလဲ ဆေးထိုးဘို့ လိုမယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး Antibody screen (အင်တီဘော်ဒီ ဆခရင်) စစ်တဲ့အခါ မိခင်လောင်းသွေးထဲမယ် Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ ရှိနေပြီးသား တွေ့ရရင် Rh immune globulin ဆေးထိုးလဲ အကြောင်းမထူးပါ။ ကလေးကိုသာ ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်။ လိုအပ်လာရင်တော့ ကလေးကို သွေးသွင်းပေးရလိမ့်မယ်။ မမွေးခင်လဲ သွင်းပေးနိုင်တယ်။ မွေးပြီးပြီးချင်းလဲ သွေးသွင်းပေးနိုင်တယ်။
• မိခင် Rh positive နဲ့ ဖခင် Rh positive = ကလေး Rh positive ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
• မိခင် Rh negative နဲ့ ဖခင် Rh negative = ကလေး Rh negative ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
• မိခင် Rh positive နဲ့ ဖခင် Rh negative = ကလေး Rh positive or Rh negative ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။
• မိခင် Rh negative နဲ့ ဖခင် Rh positive = ကလေး Rh positive or Rh negative ဆိုရင် Rh immune globulin injections ဆေးထိုးရမယ်။